China Aluminium Mkpanaka Manufacturer na Supplier | Kunda
Ngwa ngwa: ihe eji enyefe oku (dika: ihe ndi eji ebu ugbo ala, ibo uzo, windo, aru ugbo ala, nku oku, shells).
1000 usoro aluminom akara bụ nke usoro a na ọtụtụ aluminom ọdịnaya niile usoro. Ọcha nwere ike iru karịa 99.00%.
2000 usoro aluminom osisi. Ejiri oke ike, nke nwere ọla kọpa kachasị elu, nke dị ihe dị ka 3-5%. Usoro 2000 nke aluminom bụ ihe aluminom nke ụgbọelu, nke anaghị ejikarị ya na ụlọ ọrụ ndị a na-ahụkarị.
3000 usoro aluminom mkpanaka mee manganese dị ka isi ihe mejupụtara. Usoro na arụmọrụ kacha mma.
4000 usoro aluminom osisi bụ nke ihe owuwu, akụkụ igwe, ihe eji eme ihe, ihe ịgbado ọkụ; ebe na-agbaze ala, nguzogide corrosion dị mma, nguzogide okpomọkụ ma na-eyi nguzogide
5000 usoro aluminom osisi nwekwara ike ịkpọ aluminom-magnesium alloys. Ihe ndị bụ isi bụ obere njupụta, ike mgbatị dị elu na ogologo elongation.
6000 usoro aluminom. Ọ na-abụkarị ihe abụọ nke magnesium na silicon, nke kwesịrị ekwesị maka ngwa nwere nnukwu ihe chọrọ maka nguzogide corrosion na oxidation.
7000 usoro aluminum mkpara tumadi nwere zinc. Ọ bụkwa nke aerospace usoro. Ọ bụ ngwongwo aluminom-magnesium-zinc-copper, alloy na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, na ngwongwo aluminom siri ike nke nwere ezigbo mgbochi na-eyi.
8000 usoro aluminom osisi a na-ejikarị eme ihe maka aluminom, a na-ejikarị mkpanaka aluminom eme ihe na mmepụta.
Nke gara aga: Ndu Roll
Osote: Ndu efere